Kuzothatha isikhathi esingakanani uhlelo lwakho ukulungisa ifayili lami? - DataNumen
Kuya ngezici ezilandelayo:
Usayizi wefayela lakho. Uma ifayela lakho likhulu, kuzothatha isikhathi eside ukuhlaziya ngoba uhlelo lwethu luzohlola futhi luhlaziye yonke i-byte efayeleni lakho, okudla isikhathi. Isibonelo, i-100GB PST imvamisa izothatha cishe amahora ayi-10 + ukuyilungisa.
Inkimbinkimbi yefayela lakho. Uma kunemininingwane eminingi futhi kukhonjiswa ngayo kufayela lakho, khona-ke ngokuvamile kuzothatha isikhathi esiningi ukuyilungisa. Isibonelo, a SQL Server Ifayela le-MDF elinamatafula amaningi, izinkomba, nezinye izinto ngokuvamile kuzothatha amahora ambalwa ukulungisa.
Uhlobo lwefayela lakho. Amanye amafomethi wefayela anzima kakhulu, adinga isikhathi esithe xaxa kunamanye. Isibonelo, i-AutoCAD DWG file kunalokho liyinkimbinkimbi, ngakho-ke ngisho ne-5MB DWG ifayela kungathatha amahora ambalwa ukulungisa.
kungakanani, isikhathi esisetshenzisiwe
Kubuyekezwe ngoMeyi 15, 2021
Ngabe inguqulo ephelele izolulama idatha eningi kuneyedemo?Ungawuthuthukisa kanjani umkhiqizo wami?